Homeसमाचारआखिर यी छोराले के गरे ? आमाले भनिन् :”यस्तो छोरालाई जन्म दिने भगवानको पनि आँखा अ ‘न्धो हुनुपर्छ” (भिडियो सहित)
April 9, 2021 admin समाचार 3558
आमाबुवाले भविष्यमा आफुलाई पनि सह’योग र हेरचा’ह गर्ला भन्ने आशाले आफ्ना सन्तानको पालन पोष’ण गर्छन । उनीहरुको भविष्यका लागि धेरै कुरा कम्प्रो’माइज गर्छन । उनीहरुका लागि अभिभावकले धेरै दुख सहन्छन् । तर उनी सन्तानले वृद्ध अव’स्थामा आमाबुवाको संरक्षण गर्नु पर्ने बेलामा घर निका’ला गर्दा ति बुवा आमालाई कति पि’ डा हुन्छ होला । जेठो छोरा डा प्रेमराज श्रेष्ठले काठमाडौमा भएको घर ओग’टेको भन्दै बाबु आमाले सम्पत्ति फिर्ता गर्न माग गर्दै मिडिया सामु आएको खबर अहिले सामा’जिक सञ्जालमा निकै भाइ’रल भएको छ ।
पर्वत कुश्मा वडा नम्बर ५ का स्थायी बाबु हरिकुमार श्रेष्ठ र आमा कमलादेवी श्रेष्ठले छोराले आफु’हरुलाई घर निका’ला गरेको भन्दै न्याय माग् गर्दै सार्व’जनिक भएका हुन् । उनीहरुले छोराले घरसहित आधा सम्पत्ति रो’क्का गरेर या त ना आएको जान’कारी बताएका छन् ।
उनीहरुले केही दिन अघि पत्रकार सम्मे’लन गरी हरी बहादुरले सानोभर्याङमा भएको सानोभर्याङस्थित ७० हजार रुपैयाँ महिनाको भाँडा आउने तीन तलाको घर छोराले ओग’टेको बताए । उनले छोरीले इजरायल बसेर कमा’एर पठाएको १ करोड ३८ लाख रुपैयाँले पैसाले घर र घडेरी किनेको जा’नकारी दिए । ‘छोरीको नागरिकता हामीसँग नभ’एकोले आमाको नाममा घर पास गरिएको हो ।’ उनले भने तर छोराले त्यही सम्प’त्तिलाई दा ‘बी गरेर छोरीलाई स’म्पत्ति दिएको भन्दै मु द्दा दिएको छ ।’
उनले छोराले आफुलाई डाक्टर भन्दै अंकलोजीमा पि’एचडि गरेको र सिभिल अस्पतालमा काम गरेको सुनेको उल्ले’ख गरे । तर आफूहरुबीच बोल’चाल नभएको पनि उनले सुनाए । उनले तीन तलाको घरमा छोराले एकलौटी तरिकाले ओग’टेको हुनाले आफुहरु आफन्तकोमा शरणार्थी भएर बस्दै आएको बताए । ‘१६ कोठाका घर भएर पनि हामी शर’णार्थी भएर हिड्न परेको छ ।’–उनले भने ।
कमलादेवीले रातदिन दुः’ख गरेर छोरालाई हुर्का’एको, पढाएको छोराले मुख छा’ड्दा मन दुखेको बताइन् । ‘छोराले मलाई आज आमा होइन भन्दा बोली रोकिन्छ,’–उनले भनिन् । छोराको लागि गरेको मैले दुख प्रमाण दे’खाउन परेको भन्दै आराम गर्ने बेलामा मु’ द्दा मामिलामा हिँड्न परेको गुनासो गरिन् । उनले छोरा–छोरीलाई हुर्का’एको पनि प्रमाण हुन्छ र ? प्रतिप्रश्न गरिन् । यस्तो छोरा कसैको को’खमा जन्म नलिउन भन्दै उनले भनिन्–‘यस्तो छोरालाई जन्म दिने भगवानको पनि आँखा अ ‘न्धो हुनुपर्छ ।’ उनले भनिन्, ‘भगवानले यस्तालाई जन्म दिन भन्दा ग र्भ मै तु हि यो स् र कसैलाई यस्तो छोरा नदिउन् ।’ इताजा खबरबाट
April 4, 2021 admin समाचार 3263
चर्चित बलिउड अभि’नेता अक्षय कुमारलाई पनि कोरोना पाजेटिभ देखिएको छ । भारतिय मिडियाका अनुसार कोरोना पोजेटि’भ भएपछि उनी अहिले होम क्वारेन्टाइन बसेका छन् । अक्षयकुमारले पनि आफुलाई कोरोना देखिएपछि होम क्वारेन्टा’इनमा बसेको बताएका छन् ।
August 27, 2020 admin समाचार 14785
अण्डालाई पौष्टिक खाद्य पदार्थ मानिन्छ । धेरैजसो पन्छीको अण्डा खाइने भए पनि संसारभर धेरैले खाने अण्डाचाहिँ कुखुराकै हो । यसबाहेक हाँस, बट्टाई, अष्ट्रिच आदिका अण्डा पनि धेरै’ले रुचि पूर्वक खाने गरेका छन् । वन्य पन्छीहरू
August 30, 2020 admin समाचार 12900
स्वास्थ्य तथा जनसं’ख्या मन्त्रालयले नेपालमा हाल’सम्म ११ जिल्लामा ५०० भन्दा बढी कोरोना सक्रिय संक्रमित रहेको जानकारी दिएको छ । आइतबारको निय’मित लाइभ अपडेटमा मन्त्राल’यका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सो जानकारी दिएका हुन् । ५ सय
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (220429)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (212087)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (211786)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (210535)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (209322)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (208444)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (206921)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (206710)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (175620)